EURUSD Archives-Funda ukurhweba
Uhlalutyo lwe-EURUSD: Ixabiso lidala ikhefu elingeyonyani ngaphezulu kwe-1.1190 yokuchasa indawo
I-EURUSD idala ukuphulwa kobuxoki ngaphezu kwendawo yokuchasana ye-1.1190. Imarike ibonisa ubuthathaka jikelele ukususela ngoJuni. Ikhefu kulwakhiwo lwemarike lwenzekile emva kweeveki ezithile zokudityaniswa. I-Avareji ehambayo phakathi kweeBollinger Bands iqinisekisile ukuqala kwe-downtrend entsha. Amakhandlela emihla ngemihla abetha phezulu kwaye ehla ibhendi yeBollinger njengoko ixabiso lehla. Imarike yayiphakathi kwe-1.1680 kunye ne-1.1520 ngo-Oktobha wonyaka ophelileyo.
IiNdawo zeMarike ezinkulu
Indawo yokuchasa: 1.1680, 1.1380
Indawo yokubonelela: 1.1520, 1.1190
EURUSD Ixesha elide: Bearish
NgoNovemba ka-2021, iibhere ziqhube imarike kwi-1.1190. Indawo yokuchasana yenziwa malunga ne-1.1380. Imakethi iye yenza amaxabiso aphezulu ukusuka kuDisemba ukuza kuthi ga ngoku. Ukuphakama okuphezulu akuzange kwenziwe njengoko amazantsi aphezulu ayesenza. Ipatheni eyenziwe kwitshathi yemihla ngemihla yayilindele ukuphuka. Ngomhla we-12 kaJanuwari, baphule indawo yokuchasana. Ikhandlela le-bullish lihlabe nge-1.1380. Oku kunokwenzeka ukuba kukhuthaze abarhwebi ukuba bahambe ixesha elide. IStochastic yemihla ngemihla yayisathengiswa kakhulu. Oku ekugqibeleni kwabonakaliswa njengoko imarike yehla ngaphantsi kwe-1.1380.
EURUSD Ixesha elifutshane umkhwa: Bullish
Imarike ikwisithuba seeyure ezine. Iikhandlela zamva nje zeeyure ezine ziphumle kwi-Bollinger Band esezantsi. Istochastic ibonisa ukuba imakethi ibuyela kwimeko ethengiswe kakhulu.
Ukuqhawuka kobuxoki kwemarike kudale ukuphakama ngaphezulu kwendawo yokuchasa. Yawa ngokukhawuleza phambi kokuba igcwalise ukungalingani ngaphezu kwendawo. Iinkunzi kunokwenzeka ukuba ziqalise ixabiso kwakhona. Iinkunzi zenkomo zikulungele ukutyhala ixabiso ngaphezu kwendawo kunye ne-1.15200.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-nge-10 kaJanuwari
I-EURUSD idibanisa phakathi kwamanqanaba abalulekileyo kwi-1.1380 kunye ne-1.1230. Imarike ijongene nobuthathaka ngokubanzi. Ekupheleni kuka-Agasti kwaye ekuqaleni kukaSeptemba, imarike yayithengiwe kakhulu. Le stochastic ibonisa ukuba imarike yayikulungele ukuhamba mfutshane. Umyinge we-9 ohambayo uwele ngaphezu kwamakhandlela emihla ngemihla ukutshona ixabiso.
I-EURUSD Amanqanaba angundoqo angundoqo
Amanqanaba okumelana: 1.1680, 1.1380
Amanqanaba enkxaso: 1.1530, 1.1230
EURUSD Ixesha elide Trend: Bearish
Imarike yayidibanisa phakathi kwe-1.1680 kunye ne-1.1530. Udibaniso lwaqhubeka lonke ngo-Okthobha ukuya kuthi ga ekuqaleni kukaNovemba. Iinkunzi zeenkomo zahlasela imarike kakhulu ngomhla we-10 kaNovemba kwaye zaqhekeza ummandla wemfuno okhuselweyo kwi-1.1530. Ixesha le-Average Average 9 likhokelela kwimarike kwinqanaba le-1.1230.
Iinkunzi zazama ukuphinda zilawule imarike. Ukuhamba kwe-bullish kwamiswa ngokukhawuleza kwinqanaba eliphambili le-1.1380 ngomhla we-30 kaNovemba. Isigaba sesibini sokudityaniswa kwikota yokugqibela yonyaka siqalisiwe. Ukugatywa kwinqanaba eliphambili kubonwa nge-wick ebukhali ngaphezu kwekhandlela le-bullish. Iinkunzi zeenkomo kunye neebhere ziye zekhefu kunye nokudibanisa phakathi kwe-1.1380 kunye ne-1.1230 amanqanaba.
I-EURUSD Ixesha elifutshane iTrendi: Ukusukela
Umyinge ohambahambayo kwimihla ngemihla uphumla malunga ne-midpoint yamanqanaba abalulekileyo phakathi kwe-1.1380 kunye ne-1.1230. Oku kukwafana netshathi yeeyure ezine. Istochastic kwitshathi yeeyure ezine ihambile ukusuka kwindawo ethengisiweyo. Oku kubonakala ngamakhandlela e-bearish. Intshukumo ye-bearish inokuthi inqumame phakathi. Ixabiso lisenokufuna inkxaso kwi-1.1230.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-nge-3 kaDisemba
I-EURUSD ibanjelwe kwimarike eyahlukeneyo phakathi kweendawo ezinkulu. Ixabiso ngoku lihamba emacaleni ngaphandle kolwalathiso oluchaziweyo kwixesha lemihla ngemihla. Imarike ibonwa ngokuqhubekayo ukwenza izilungiso emva kweempembelelo. Ngo-Okthobha ukuya kutsho phakathi kuNovemba, imarike yayidityanisiwe. Amanqanaba amakhulu enza ukuchasana kunye nenkxaso kwi-1.1680 kunye ne-1.1530.
EURUSD Amanqanaba amakhulu
Inqanaba lokumelana: 1.1680, 1.1380
Inqanaba leNkxaso: 1.1530, 1.1230
Emva kokuhlanganiswa ngaphakathi kwamanqanaba amakhulu kude kube phakathi koNovemba, impembelelo yanciphisa ixabiso elingaphantsi kwendawo yenkxaso kwi-1.1530. Imarike yatshona de yafikelela kwi-1.1230. Imarike ibanjwe njengoko ihlulekile ukuphula i-1.1380 kunye ne-1.1230 amanqanaba. Amandla eebhere neenkunzi zeenkomo aphantse ukulingane; ngenxa yoko, akukho lwalathiso lubalaseleyo.
I-Avareji ehambayo ye-9 kunye ne-21 nayo iye yawela emacaleni amaxesha amaninzi kwitshathi yemihla ngemihla. Amanqanaba amakhulu kwi-1.1380 kunye ne-1.1230 yenze ukuchasana okunamandla kunye nenkxaso. Inyanga kaDisemba yayingenamkhombandlela ngokupheleleyo kwi-EURUSD.
I-EURUSD Ixesha elide iTrendi: Ukusukela
Isalathiso samandla esihambelanayo sibonisa ukuba imarike ihambile ukusuka kumgangatho woluhlu kwi-1.1230 ukuya phezulu kwi-1.1380. Umhla wokugqibela kaDisemba wabetha izinga lokumelana ne-1.1380. Iibhere ngoku ziqhuba ixabiso kwi-1.1230. Oku kubonwa ngamakhandlela amathathu alandelelanayo e-bullish kwitshathi yeeyure ezine. I-EURUSD ibanjelwe kumanqanaba amakhulu.
I-EUR / USD, okwangoku ithengiwe kwaye ithengiswe ngaphantsi kweentloko zeveki malunga ne-1.1330, ngexesha elilawulwayo, iimeko zokurhweba ezincitshisiweyo zeeholide.
Imarike yathengiswa nge-moderal bias positive kule veki phakathi kweemeko ezinkulu zengozi, ezibonakala zinzima kakhulu kwaye zibonakala zigcinwe ngokufanelekileyo ngaphezu kwe-1.1330. Ngokwenene, umndilili ohambahambayo weentsuku ezingama-21 uhlala apha, njengoko iiseshini ezihambayo zibonise inkxaso efanelekileyo kwiiseshini zamva nje.
Yintoni ebanjwe nguNyaka omtsha kwi-EUR / USD
Njengoko i-strategists iqikelele, i-EUR / USD isathengisa kakuhle phakathi koluhlu lwe-1.1240 - 1.1360, kwaye oku kuye kwalawula ininzi yenyanga. Olu luhlu lunokuhlala lunjalo, de siqale uNyaka oMtsha kwaye imarike iqalise kwakhona ngokupheleleyo kwaye imiqulu ibuyela kwesiqhelo. Ngokwenene, iveki yokuqala yonyaka omtsha iya kuba yinto exakekileyo ngenxa yokukhutshwa kwengxelo yemisebenzi yase-US kunye nokuveliswa kwe-ISM kunye novavanyo lwenkonzo ye-PMI. Sinedatha encinci kakhulu yase-US yenqaku ngaphandle kwengxelo eqhelekileyo yokungabinamsebenzi ngooLwezine. Ikhalenda yezoqoqosho ye-Eurozone inomdla kancinane kunye noqikelelo lokuqala ukuba i-HCIP kaDisemba icwangciselwe ukukhululwa ngoLwesine.
Ukuphonononga ngobuchwephesha i-EUR / USD, isicatshulwa sibonakala sihamba kwiveki yokugqibela ephezulu malunga ne-1.1340s, ngasentla eya kuzisa ugxininiso lokuvavanya ukuphakama kweDisemba phakathi kwe-1.1360 - 1.1380s. Ngokwenene ixabiso libonakala lenza unxantathu onyukayo onyukayo ngexesha lasemva kwenyanga, elibonisa ubukhulu becala intshukumo yemarike ephezulu iyabonakala. Ukuba i-trendline ephezulu iphukile ukuya kwi-downside, oku kuya kunika uphawu lokunyakaza kweemarike ezisezantsi ezibonisa ukuba i-EUR / USD iya kuhamba ngaphantsi kwinqanaba le-1.1300.
tags EURUSD, Iindaba ze Forex, kwiimarike
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-nge-28 kaDisemba
I-EURUSD ayigqibeki njengoko ihlala ivalelwe ekudityanisweni ngaphezulu kwenqanaba elibalulekileyo le-1.12020. I-EURUSD ivalwe ukusuka phezulu kwinqanaba lokumelana ne-1.13840. Imakethi ihleli ingenazigqibo malunga nokuba ingenza i-U-turn okanye ijube ngaphezulu. Abathengisi kunye nabathengi, ke ngoko, kunokuthiwa baxabene njengoko kungekho mpembelelo inkulu kwintengiso.
I-EURUSD Amanqanaba aPhambili
Amanqanaba okumelana: 1.13840, 1.22620
Amanqanaba enkxaso: 1.09900, 1.12020
I-EURUSD yehla emva kokubetha i-1.22620 okwesibini kwisithuba seenyanga ezimbini. Oku kwakhokelela kwipatheni yexabiso le-bearish ephindwe kabini. Okulandelayo kukuhla kakhulu kwimarike apho amanqanaba abalulekileyo aliqela aye aphulwa. Ixabiso, nangona kunjalo, lifumene ukuchasana ukuya phantsi kwi-1.17130, eyona nto intamo ye-double top formation. Kwakukho nokuchasana okungaphumelelanga kwi-market drop kwi-1.15180.
Abathengi ekugqibeleni baya kumisa ukuwa kwemarike kwi-1.12020 njengoko bejongana nabathengisi ngamandla alinganayo. Isiphumo kukuba ixabiso liye langenasiphelo ngaphezu kwenyanga, ukusuka phakathi kwe-1.13840 kunye ne-1.12020. Ngelixa i-EFI (i-Elder Force Index) ibonisa ukulingana kweemarike, okwangoku kukho ukuthambekela kwiinkunzi njengoko umgca wamandla uhlala kwixabiso elihle.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-EURUSD igcina umkhwa wayo wokungaqiniseki njengoko iqhubeka ishukuma emacaleni ngamakhandlela amancinci. Kanye nje kwitshathi yemihla ngemihla, isalathisi se-EFI sinika ucalucalulo kwiinkunzi zeenkomo phakathi kokulingana kweemarike. Le mvakalelo iphinda igxininiswe yi-RSI (i-Relative Strength Index), ehamba ngaphezu kwenqanaba le-zero ukusuka kwi-bullish position. Amandla emarike anokugubha ixabiso le-dormancy kwaye alityhalele kwi-1.15180.
I-EUR / i-USD ithengiselwe ngeemvakalelo eziphakamileyo ngoLwesithathu njenge dollar (DXY) ibeka kwakhona phambi kwesigwebo seFed. Ngeli xesha, “ULwesine oMkhulu” iya kudlala indima ebalulekileyo kwisenzo sexabiso elikufutshane le-euro ngenxa yentlanganiso ye-ECB ezayo. Oko kuthethiweyo, imixholo yokwahlukana kwebhanki ephakathi iya kuqhuba umkhombandlela wexabiso lexesha elisondeleyo kwesi sibini.
I-EUR / USD isanda kurekhoda i-bounce kwinkxaso ye-1.1250 kwaye ijolise ekubetheni i-1.1300 kunye ne-1.1350 emva koko.
IDola yaseMelika inokuPhila kwiSiphumo seFed esiKholekileyo
Ngexesha lokushicilela, 'ifayibha' irhweba kwi-1.1275 njengoko i-EUR ithatha umphunga othile. Nangona kunjalo, isiphumo sentlanganiso yebhanki ephakathi kule veki sinokomeleza kakhulu idola ngokuxhomekeke kwizigqibo kunye nezimvo ezenziweyo.
Okwangoku, i-inflation ye-US ye-Producer-Price index yenyuka ngo-0.8% ngoNovemba, ebonisa ukuba ukunyuka kwamaxabiso e-US kunokuhlala kumanqanaba aphezulu ukuya kwi-2022. Nangona kunjalo, ngokurekhodwa okumangalisayo kwe-9.6% YoY, izivuno zase-US zagxuma kunye nengxelo kwaye zadlula. uqikelelo, kwaye barekhoda inyathelo labo eliphezulu ukususela utshintsho olukhulu kwisalathiso ngo-2009. Ibhondi karhulumente ye-2 yeminyaka yonyuka ngo-0.02%, ukusuka kwi-0.64% ukuya kwi-0.66%, ngelixa i-10-year bond ikhula ukusuka kwi-1.42% ukuya kwi-1.44%.
Oko kuthethiweyo, abaqikeleli balindele ukuba abaqulunqi bomgaqo-nkqubo be-Fed babhengeze ukukhawulezisa kokuphela kokuthengwa kwebhondi yenyanga njengoko ukuhla kwamandla emali kuvutha.
tags EURUSD, Forex, uhlalutyo olusisiseko, iindaba
Iinkunzi ze-EURUSD zenza iMarike eBalulekileyo iintshukumo zokuphelisa iBearish Regime
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-nge-7 kaDisemba
Iinkunzi ze-EURUSD zenza intshukumo ebalulekileyo yemarike ukuphelisa ulawulo oluqhubekayo lwe-bearish. Emva kokuzama ukungaphumeleli ukumisa ulawulo lwe-bearish kwiindawo zokumisa amaxabiso ahlukeneyo, abathengi baye baphakamisa esinye isitophu ukuthintela ukwehla kwemarike. Njengoko ixabiso liwela kwinqanaba elibalulekileyo le-1.03680, i-EURUSD yenza i-bullish engulfment candlestick ukufikelela kwi-1.04450.
I-EURUSD Amanqanaba aBalulekileyo
Amanqanaba okumelana: 1.08930, 1.07390, 1.05890
Amanqanaba enkxaso: 1.03680, 1.04450, 1.05400
EURUSD Ixesha elide Trend: Bullish
Ulawulo lwe-bearish lwaqala emva kokuba iinkunzi zeenkomo zazama ukuphakamisa imarike. Nangona kunjalo, ukwaliwa kwi-1.09320 kuthumele ixabiso ukuba lihle lihle nangakumbi. Inqanaba elinamandla elibalulekileyo le-1.08200 alizange lithintele i-EURUSD ixesha elide ngaphambi kokuba lehle phantsi. Imarike iphazamiseke kumanqanaba amaxabiso amaninzi, kubandakanywa iindawo eziphambili zokubamba kwi-1.07010 kunye ne-1.05400. Kwakucingelwa ukuba i-1.04450 iya kumisa ukuwa kwemarike, kodwa yasilela ngokunjalo.
Ngomhla we-26 kaNovemba, ixabiso lehla ngaphantsi kwe-1.04450 inqanaba lokubamba kunye nezilayidi kunye nomgca ophakathi kwendlela yokuhla ukuya kwi-1.03680. Kucingelwa ukuba ekugqibeleni kukho ukubanjwa kweenkunzi kwimarike njengoko i-bullish engulfment candle izama ukukhupha ixabiso ngaphezu kwetshaneli ehlayo. Isalathisi se-ATR (I-Average True Range) sibonisa ukuba nangona ixabiso liyancipha, kukho ukunyuka okuthe gqolo kokuguquguquka kweemarike, apho iinkunzi zenkomo zithatha inzuzo.
Itshathi yeeyure ezi-4 ibonisa inkqubela phambili evela kubathengi. Ixabiso laphuka phezulu kwitshaneli kodwa ladibana nenkcaso kwi-1.04450 ukuhla kwakhona kwisitishi. Ngokwenza njalo, i-RSI (i-Relative Strength Index) inomgca wayo wesignali uphakama ngaphezu kwe-50 uphawu kwaye ubuye ubuyele ngaphantsi kwayo.
Iinkunzi kulindeleke ukuba zibethe ngamandla okwesibini emarikeni ukubangela ukuguqulwa kwexabiso. I-1.05040 yinjongo.
I-EURUSD ihleli ngaphantsi kwe-1.1300 njengoko ibeka emngciphekweni ukuqhubela phambili
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-nge-6 kaDisemba
Isibini se-EURUSD saqhubeka sithengisa kwiindibano, sithatha ithuba leemeko, kwaye safikelela kwi-1.1266 ephantsi. Esi sibini siye sarhweba nge ukuthengisa cala kwaye isanda kujika ibuyela emazantsi kwitshathi yemihla ngemihla, apho ngoku irhweba nge-0.21 yeepesenti ezantsi ngemini.
Amanqanaba enkxaso: 1.1250, 1.1186, 1.1100
Kwiitshathi zemihla ngemihla, esinye isilayidi siqikelelwa ukufumana inkxaso eqinileyo kwingingqi ye-1.1186, equlethe ukuhla konyaka ukuza kuthi ga ngoku. I-pullback eyongezelelweyo inamandla okuvavanya inkxaso yengqondo kumanqanaba e-1.1100, nangona kunjalo, ukuhamba okuphantsi akunakwenzeka kwixesha elisondeleyo. Inqanaba elibalulekileyo libekwe ngaphantsi kwe-1.1250 kunye ne-1.1186.
Kwimeko ebanzi, i-EURUSD ihlala i-bearish ngelixa irhweba ngaphantsi kokuchasana okuthe tye kunye nenqanaba elibalulekileyo kwi-1.1350. Ukuqhekeka kwinqanaba le-1.1350, ngakolunye uhlangothi, kuya kujolisa kwinqanaba le-1.1422 kwindlela eya kwindawo yokumelana ne-1.1500. Ukuwa kwemimandla ye-1.1250, kwenye indawo, ibonwa njengesalathisi sokuqala sokuqhubeka kwe-bearish.
Umngcipheko we-EURUSD ulinganiswe kwi-negative kwitshathi yeeyure ze-4, njengoko isibini sikhula ngaphantsi kwe-bearish eqinile ye-5 kunye ne-13 ehambayo. Iimpawu zobuchwephesha ziye zatshintshela kwi-downside, kunye namanqanaba angalunganga. Nangona kunjalo, i-RSI ayikafikeleli kumhlaba othengisiweyo, ivumela ukuthengiswa okungakumbi.
Ukwaphulwa ngaphantsi kwe-1.1250 inkxaso ethe tyaba kunokukhokelela ekulahlekeni okunzulu, kunye nabatyalo-mali abajolise ekuhambeni kwinqanaba le-1.1000. Ngenxa yokuba le yindawo eyomeleleyo yenkxaso, ixabiso kufuneka libambe kule ndawo. Iibhere, ngakolunye uhlangothi, ziya kukhangela ukuhamba kwi-1.1100 ukuba ukudibanisa kuphuka.
← Entsha izithuba1 2 ... 18 abaDala izithuba →